ICC တရားရုံးသို့ စစ်ကောင်စီ၏ ရ/က်စ/က်မှု့တွေကို သက်သေနှင့်တကွ NUG တင်ပြတော့မည် – Shwe Thadin
ICC တရားရုံးသို့ စစ်ကောင်စီ၏ ရ/က်စ/က်မှု့တွေကို သက်သေနှင့်တကွ NUG တင်ပြတော့မည်
04/01/2022 admin News 0
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် ပြည်သူ ၃၅ ဦးကျော်ကို ရ/က်ရ/က်စ/က်စ/က် ညှဉ်း/ပန်း နှိ/ပ်စ/က်၍ စစ်ကောင်စီ က သ/တ် ဖြ/တ်မှု ICC တရားရုံးသို့ သက်သေနှင့်တကွ NUG တင်ပြမည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အနေဖြင့် ကရင်နီပြည်နယ်၊ မိုဆိုကျေးရွာအနီး လူအစုလိုက် အပြုံ လိုက် မီး/ရှို့ သ/တ်ဖြ/တ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ သည့် အကြမ်း ဖက်စစ်ကောင်စီကို သက်သေအထောက်အထား အခိုင်အမာနှင့်အတူ
နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံး (ICC) ကို တင် ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောဆိုသည်။ “NUG က ဒီကိစ္စကို ကျူးလွန်တဲ့သူကို ဖော် ထုတ်ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံရေးခုတုံးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျူးလွန်တဲ့သူကို အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။ ကယားပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိုဆိုကျေးရွာအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်သူ ၃၅ ဦးကျော်ကို မီး/ရှို့ သ/တ်ဖြ/တ်ခံရမှုတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ ခမရ ၅၃၁ နှင့် တပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းက ရ/က်/ရ/က်/စ/က်/စ/က် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ (KSP) ၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုဘိုဘိုက ပြောဆိုသည်။
“ဒီကိစ္စမှာ အဓိကကျူးလွန်တဲ့သူကတော့ မြန်မာ တပ်မတော်ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လက် အောက် ခံ ဖရူဆိုအခြေစိုက် ခမရ ၅၃၁ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တပ် ၆၆ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနဦးသိရှိထားပါတယ်” ဟု ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ (KSP) ၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုဘိုဘိုက ပြောသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က သေ/ဆုံးရသည့်သူများ သည် PDF များဖြစ်သည်ဆိုသော ပြောဆိုရှင်းလင်းချက်သည် မှန်ကန်မှု မရှိ ကြောင်းနှင့်
သေ/ဆုံးခဲ့ရသည့် သူများသည် အရပ်သားများဖြစ်ကြောင်း မိသားစုက ရှင်းလင်းကြသည်။ ကရင်နီ ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ (KSP) အနေဖြင့် အ/လောင်းများကို သယ်ဆောင်သည့် အခါမှာ မီး/ရှို့ မခံထားရသည့် အ/လောင်း ၄ လောင်းနှင့် မီး/ရှို့ခံ ထားရပြီး ခန္ဓာကိုယ်/တဝက်သာပြန်ရတဲ့ အ/လောင်းက ၃၁ ရရှိခဲ့ပြီးတော့ ပြန်သယ်လို့မရဘဲ ပြာ အဖြစ်ရှိ သွား သည့် ရုပ်အလောင်းများလည်းရှိကြောင်း ရှင်းလင်းထားသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဘက်က အ/လောင်းများကို လက်ပြန် ကြိုး/တုပ်ပြီး မီး/ရှို့ခံထားကြောင်း၊ ရင် ဘက်တွင် ထိုး/သွင်းဒဏ်ရာ လက်ကိုနောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားပြီး မီး/ရှို့အ/သ/တ်ခံထားကြောင်း၊ အလွန် ရ/က်စ/က်စွာ သ/တ်/ဖြ/တ် ထားကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ၊ သက်သေများနှင့်တကွ ချပြရှင်းလင်းထားသည်။
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ express ကားကြီးစီးပြီး သွားနေတဲ့ စခတွေ ထိပြန်ပြီ (ရုပ်သံ)
ပရဟိတ နဲ့ လုပ်စားတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မူ့တွေကြောင့် နားတော့မယ်ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက်
တင်ပါး မတရားကြီးတဲ့ မိန်းမတွေဟာ မိန်းမယုတ်စာရင်း ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့စကားဟာ အမှန်လား? မနာလို လို့ပြောတာလား?
ဗိုလ်နဂါးအတွက် လက်နက်ကြီးအလှူရှင် ပေါ်ပေါက်လာပြီsee more……….